Imwe-chidimbu Isolate Suits
Zuva Rekupfekedza Zvipfeko
China yakave mugadziri mukuru wepasi rose uye mutengesi
ne admin pane 20-10-10
Kubva zvakawanikwa China kuWTO, machira uye mbatya zvave chikamu chakakosha chekuburitsa China. Mumakore gumi apfuura, nekudzimiswa zvishoma nezvishoma kwequotout system, zvipfeko zveChina, machira uye mbatya kunze kwenyika zvine nharaunda yakasununguka yekunze. Favora ...
Kuongorora kwekupinza uye kutumira kunze mamiriro eChina indasitiri yezvipfeko mu2020
Senyika hombe yekutengesa mbatya, huwandu hweChina hwekupfeka hwekunze hunodarika mabhiriyoni zana emadhora ekuAmerica, iro rakakura kwazvo kupfuura huwandu hwekupinza nguo. Nekudaro, pamwe nekushandurwa kwechimiro chehupfumi cheChina mumakore achangopfuura, indasitiri yezvokupfeka yakatenga zvishoma nezvishoma mu ...
China inguva huru yekutengesa nguo, asi bhizimusi ravo rekuwedzera riri kuderera
ne admin pane 20-09-04
Semutengesi mukuru wenguvo, China inotengesa kunze kwedu madhora zana emabhirioni ehembe gore roga-roga, zvakanyanya kupfuura kupinza kwayo kunze. Zvisinei, pamwe nekushandurwa kwehupfumi hweChina mumakore achangopfuura, indasitiri yehembe yakapinda padanho rakakura, uye zvikamu zvechigadzirwa zvine gr ...
Kero: Da 'musha, Chongxian mumugwagwa, Yuhang dunhu, Hangzhou, China
unogona kutibata isu heer